सर्कुप्रेस: ​​WordPress को लागी ईमेल अन्त मा यहाँ छ! | Martech Zone
करीव तीन बर्ष पहिले, एडम सानो र म हाम्रो मनपर्ने कफी शपमा बसिरहेका थियौं र उसले उल्लेख गरिरहेको थियो कि ईमेल सेवा प्रदायकहरू कसरी एकीकृत गर्न सकिन्छ। मैले एक्लेक्ट्रेटमा एकीकरण परामर्शदाताको रूपमा काम गरेको थिएँ त्यसैले म चुनौतिहरूको बारेमा पूर्ण रूपमा सचेत थिएँ। आदम र उनकी श्रीमती स्थापना भयो एजेन्ट सॉस, एक रियल इस्टेट मार्केटिंग प्लेटफर्म जुन हुर्किएको थियो र हप्ताको हजारौं ईमेलहरू पठाउँदैछ। समस्या यो थियो कि ईमेल सेवा प्रदायकहरू (ESPs) जहिले उनीहरूको एकीकरण सुविधाहरू मागमा वा उनीहरूको प्रयोगकर्ता ईन्टरफेसको लागि विचारको रूपमा निर्माण गर्दछ।
हामीले खन्न र केहि अनुसन्धान गर्न सुरु गर्यौं र त्यहाँ धेरै थोक ईमेल प्रदायकहरू फेला परेका थिए, अमेजनले सुरु पनि गरिसकेका थिए, तर मूल्य र जटिलता केवल यसको लायक थिएन। जब ईमेल मार्केटिंग प्रयोगकर्ताहरूको प्राथमिकतामा आदमको जस्तो थियो, उनी अधिक र अधिक आश्रित हुँदै थिए, बढी खर्च गर्दै थिए, र बढी निराश भए। त्यसैले उसले आफ्नै भवन निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो! लगभग एक वर्ष पछि, आदमको प्लेटफर्मले आफ्नै एमटीए (मेल ट्रान्सफर एजेन्ट) बाहिर पठाउँदै थियो। आदमले आफ्नै बाउन्स व्यवस्थापन निर्माण गरे र यसको शीर्षमा ट्र्याकि click पनि क्लिक गर्नुहोस्! र उनको ड्रेसेरेबिलिटि उसले पहिले काम गरेको सबै प्लेटफर्महरूमा बराबर थियो।
त्यस बिन्दुमा हामीले हामीले विस्तृत निर्माणका लागि डिजाइन गरेका पूर्वाधारहरूको कसरी प्रयोग गर्न सक्दछौं भन्ने कुरा हामीले मंथन गर्न थाल्यौं। संग Martech Zoneको ग्राहक वृद्धि १०,००,००० ग्राहकहरु लाई बढ्दै छ, हामी हाम्रो इमेल विक्रेतामा धेरै पैसा खर्च गरिरहेका थियौं र त्यति खुशी पनि थिएनौं। हामीले दुई प्रणालीहरू प्रबन्ध गर्नुपर्‍यो, एउटा सामग्री लेख्नको लागि र एउटा ग्राहकहरू र सामग्री प्रबन्ध गर्नका लागि। किन हामी यो सबै चलाउन सकेनौं WordPress?
हामी सक्छौ ... र वर्डप्रेसले ती वर्षहरूमा लामो यात्रा गरिसकेको थियो। अवसरको लागि कुञ्जी अनुकूलन पोष्ट प्रकारहरूको थप थियो। अनुकूलन पोष्ट प्रकारहरूले हामीलाई कल गर्न एक प्रकारको सक्षम बनायो ईमेल र ईमेल निर्माण गर्न पूर्वनिर्धारित सामग्री व्यवस्थापन र टेम्पलेटिंग प्रणाली प्रयोग गर्नुहोस्। आदमले आफ्नो पूर्वाधार लिए जुन अहिले स्केलेबिलिटीका लागि अनुकूलित थियो, र हामी प्लगइनमा काम गर्न गयौं! त्यसो भए, प्रयोगकर्ताले सामग्री सिर्जना गर्न र प्रबन्ध गर्न प्लगइन प्रयोग गर्न सक्दछ, र सर्कुप्रेसले पठाउने, ट्र्याकिंग, बाउन्स प्रबन्धन, सदस्यता व्यवस्थापन, र अन्य कार्यहरू प्रबन्ध गर्न सक्दछ।
हामी दुबै दिनमा कामहरू भएकोले, प्लगइनले यसको टोल लियो आदमले यसमा काम गरे, मैले यसमा काम गरें, स्टीफनले यसलाई पुनःलेखन गरे, र हामीले परीक्षण, परीक्षण, परीक्षण र अधिक र अधिक परीक्षण गर्यौं। हामीले गत हप्ता WordPress मा प्लगइन सबमिट गर्‍यौं र उनीहरूले केही राम्रो सल्लाह प्रदान गरे। पछिल्लो हप्ता, आदमले टेम्प्लाटिंगको केहि प्रमुख अंशहरू पुनःप्रलेख गरे र हामीले शुक्रबार फेरि सबमिट गर्‍यौं। हामीले चाहेको समाचार पाउनु भन्दा पहिले यसले धेरै समय लिएन ... वर्डप्रेसले अनुमोदन गर्‍यो सर्कप्रेस। हामी विश्वास गर्छौं कि हामी केवल इ-मेल सेवा प्रदायक विशेष रूपमा वर्डप्रेसको लागि निर्मित छौं!
हामीले केहि धेरै अनन्य सुविधाहरू थपेका छौं। प्लगइनसँग सदस्यता फाराम विजेटहरू, सर्टकडहरू र प्रकार्यहरू एकीकृत छन्। प्लगइनले स्वचालित रूपमा तपाइँको साइटहरूमा तपाइँका ईमेलहरू प्रकाशित गर्दछ - त्यसैले तपाइँको अनलाइन दृश्य तपाइँको आफ्नै साइटमा सहि छ! दैनिक र साप्ताहिक ईमेलहरू स्वचालित छन् र बाहिर तपाईं बाहिर नयाँ सामग्री छ जब। वास्तवमै सुन्दर सुविधा यो हो कि इम्बेडेड भिडियोहरू स्क्रीनशटहरू र प्ले बटनहरूको साथ प्रतिस्थापन हुन्छन् जसले गर्दा छविहरू प्ले नगर्ने ईमेल क्लाइन्टको आधा अझै पाठकले भिडियो प्ले गर्न यसलाई अनुमति दिन्छ। अधिक सुविधाहरू त्यसका लागि कुनाको वरिपरि आउँदैछन्!
महँगो ईमेल विक्रेताहरु संग गडबडी को थकित र तपाइँको सामग्री वास्तव मा उपयोग गर्न चाहानुहुन्छ? का लागि साईन अप गर्नुहोस् सर्कप्रेस आज! हामी पहिले नै यस ब्लगमा ग्राहकहरूलाई सर्कप्रेसमा रूपान्तरण गर्दैछौं ... सदस्यता लिन निश्चित हुनुहोस् र उनीहरूले कति राम्रो देखिन्छन् भनेर तपाईले देख्नुहुनेछ।
तपाईंको ईमेल अभियानहरू हेर्नुहोस्
एक अन डिमान्ड ईमेल पठाउनुहोस्
तपाइँको खाता र तालिकाबद्ध पठाउन सेटअप गर्नुहोस्
तपाइँको टेम्पलेट अनुकूलित गर्नुहोस्
तपाइँको टेम्पलेट कोड अनुकूलन गर्नुहोस्
तपाईंको टेम्पलेट पूर्वावलोकन गर्नुहोस्
टैग: WordPress को लागी ईमेल गर्नुहोस्ईमेल मार्केटिंग WordPressWordPress को लागी समाचार पत्रWordPress ईमेलWordPress ईमेल प्लगइनवर्डप्रेस न्यूजलेटरWordPress न्यूजलेटर प्लगइनWordPress सदस्यता प्लगइन
पोष्टानो स्पोर्ट्स सोशल मिडिया कमाण्ड सेन्टरको विकास गर्दछ
हे डगलस, राम्रो खबर! धन्यवाद, यो साँच्चै एक अद्भुत सुविधा जस्तो लाग्छ र म निश्चित रूपमा सदस्यता लिनेछु र हेर्नेछु।
22 डिसेम्बर, 2013 बेलुका 7:21 बजे
बधाई छ। यो धेरै, धेरै आकर्षक देखिन्छ ... तर मेरो वास्तविक AWeber आधार के हुनेछ? के म यसलाई तपाइँको प्लेटफर्ममा सार्न सक्छु?
वैसे। CircuPress को पहिलो पृष्ठ मा "Email को लागी CircuPress नामित द मस्ट-हव बिजनेस वर्डप्रेस प्लगइन!" शीर्षकको पाठ बोस छ। र त्यहाँ "WordPress हुनै पर्ने WordPress प्लगइनहरूको शीर्ष6मा नाम दिइएको छ" भन्छ। मलाई लाग्छ कि तपाइँ भन्न चाहानुहुन्छ "CircuPres लाई नाम दिइएको छ ..."
आफ्नो परियोजना संग शुभकामना!
22 डिसेम्बर, 2013 बेलुका 8:26 बजे
धन्यवाद @guillermoziegler: disqus! तपाईंले AWeber कसरी प्रयोग गरिरहनुभएको छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ। यदि तपाइँ आफ्नो दैनिक वा साप्ताहिक इमेल पठाउन AWeber प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, हो - तपाइँ तपाइँका सदस्यहरू (5,000 प्रत्येक इमेल) आयात गर्न सक्नुहुन्छ। र सुधारको लागि धन्यवाद - मैले साइट अपडेट गरेको छु!
23 डिसेम्बर, 2013 बेलुका 12:21 बजे
र अर्को प्रश्न... के म मेरो योजनालाई आवश्यकता अनुसार अपग्रेड/डाउनग्रेड गर्न सक्छु?
23 डिसेम्बर, 2013 बेलुका 12:27 बजे
हामी अहिले बिलिङमा काम गरिरहेका छौं - हो, बिल्कुल!